Sasakawa ငြိမ်းချမ်းရေးခရီး ဘယ်အထိ ပေါက်ရောက်မလဲ
Hun Sen and Yohei Sasakawa discusses on Myanmar. (Credit - Samdech Hun Sen, Cambodian Prime Minister Facebook Page)
နိပွန်ဖေါင်ဒေးရှင်း ဥက္ကဌ Sasakawa နဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေ ထိုင်းနိုင်ငံ ၊ ချင်းမိုင်မြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လူသားခြင်း စာနာမှုဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသုံးသပ်သူတချို့နဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီး ကိုဝင်းမင်းက တင်ပြထားပါတယ်။
မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးကြားဝင်ဆောင်ရွက်သူ နိပွန်ဖေါင်ဒေးရှင်း ဥက္ကဌ Sasakawa နဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေ မတ်လ ၁ဝ ရက်နေ့က ထိုင်းနိုင်ငံ ၊ ချင်းမိုင်မြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ် ခရီးစဉ်ကိစ္စနဲ့ လူသားခြင်း စာနာမှုဆိုင်ရာ အကူအညီတွေအတွက် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
ဆာဆာကာဝါဟာ ဒီအစည်းအဝေးမတိုင်ခင်၊ အာဆီယံဥက္ကဌ ကမ္ဘောဒီယားဝန်ကြီးချုပ် နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့သလို၊ ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့နဲ့လည်းတွေဆုံခဲ့ပါတယ်။ ဆာဆာကာဝါရဲ့ခရီးစဉ်နဲ့သူရဲ့ကြိုးပမ်းမှုကနေ ဘာတွေမျှော်လင့်နိုင်ပါမလဲ။ ဒီအကြောင်းအရာတွေကို ဆာဆာကာဝါနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သူတချို့အပါအ၀င်၊ သုံးသပ်သူတချို့နဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီး ကိုဝင်းမင်းက တင်ပြထားပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ မြန်မာပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် ဂျပန် နီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်း ဥက္ကဌ ဆာဆာကာဝါ အနေနဲ့ ကရင်၊ ရှမ်း ၊ ကရင်နီ လက်နက်ကိုင်တပ် KNU,RCSS, KNPP တို့အပြင် တနိုင်ငံလုံး အပစ်ရပ်စာချုပ် NCA လက်နက်ကိုင် ၁ဝဖွဲ့ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အဖွဲ့ PPST နဲ့ တွေ့ရာမှာ ထူးခြားချက်ကိုတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ PPST ဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင် ဗိုလ်မှူးကြီးခွန်ဥက္ကာ က .
ခွန်ဥက္ကာ။. ။ အာဆီယံ ကိုယ်စားလှယ်သွားမယ် ခရီးစဉ်အပေါ် သူအနေနဲ့ အထောက်ကူပြုမယ်ဆိုတာပါပဲ။ သူက လက်တွေ့အထောက်ကူဖြစ်အောင် တိုက်တွန်းမယ်။ သူအတွေ့အကြုံကို ရှင်းပြမယ့်သဘောပါ။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ကလည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်။ အဓိကကတော့ ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့ ပြည်သူလူထုကို အကူအညီပေးဖို့ပေါ့ဗျာ။ ဒုက္ခသည်တွေကို ကူညီဖို့ ပေါ့ဗျာ။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ဒါအပြင် လက်ရှိ ချင်းမိုင် ကို ရောက်နေတဲ့ ISP မြန်မာ့ မဟာဗျူဟာနဲ့ မူဝါဒလေ့လာရေးအဖွဲ့က ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင်သူငြိမ်း ကလည်း
ဦးအောင်သူငြိမ်း (ISP မဟာဗျူဟာနဲ့ မူဝါဒလေ့လာရေးအဖွဲ့) ။. ။ လူသားချင်းစာနာမှု Humanitarian Ground ကနေ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ရှေ့ဆက်တိုးလို့ရအောင် ချည်းကပ်ချင်တဲ့သဘောရပါတယ်။ တဖက်ကလည်း ဘယ်လိုပြသာနာရှိလဲဆိုတော့ တလောလေးက နိုင်ငံခြားရေးဌာန စစ်ကောင်စီက ကြေညာချက်ထုတ်တဲ့အခါမှာ နိုင်ငံတကာက ဒီလို ကြားဝင်ဖြန်ဖြေမှုတွေဝင်လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာ သူတို့က မောင်နှင်တဲ့နေရာမှာ နေမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာ လုပ်ရကိုင်ရ သိပ်တော့လွယ်တဲ့ပုံစံမရပါဘူး။ နောက်တခုကကြတော့လည်း လက်ရှိ NUG တို့ New Plan တို့ကိုလည်း အကြမ်းဖက်အုပ်စုအနေနဲ့ ကြေညာထားတယ်ပေါ့ဗျာ။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့မရှိဘူးဆိုပြီးကြေညာထားတယ်။ ပြသာနာတွေကတော့ ပြေလည်ဖို့ ခက်မယ်ထင်တယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ဆာဆာကာဝါ အနေနဲ့ အခုထိုင်းနိုင်ငံ မတိုင်ခင် တနင်္လာနေ့က ကမ္ဘောဒီယားနဲ့ စနေက အင်ဒိုနီးရှား ခရီးတွေကိုလည်း ထူးထူးခြားခြား ဆွေးနွေးခဲ့တာတွေကိုလည်း ရှင်းပြခဲ့တယ်လို့ ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာ က ပြောပြာပါတယ်။
ခွန်ဥက္ကာ ။. ။ ကမ္ဘောဒီယားမှာက ဟွန်ဆန်နဲ့လည်း တွေ့တယ်။ အာဆီယံ အထူးသံတမန်နဲ့လည်းတွေ့တယ်။ ဟွန်ဆန် နဲ့ မိတ်ဆွေဖြစ်တာ အနှစ် ၃၀ ရှိပြီတဲ့။ ဟွန်ဆန် က သူပြောတယ်တဲ့ သူဥက္ကဌ ဖြစ်တုံးမှာ အကြံပေးအဖြစ်ခန့်ဖို့တဲ့။ အကြံပေးခန့်တာတော့ သူလက်မခံသေးဘူးပေါ့။ ဒါပေမယ့် လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေပေးမယ်ပေါ့။ အထူးကိုယ်စားလှယ် ခရီးစဉ်မှာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်လို့တော့ သူပြောတယ်။ လိုအပ်တာကိုတော့ ပန့်ပိုးမှာပေါ့ဗျာ။ ကမ္ဘောဒီးယားပြီးရင် ရှေ့နှစ်မှာ အင်ဒိုနီးရှားကလည်း ဥက္ကဌဖြစ်မယ်ပေါ့။ အင်ဒိုနီးရှားမှာ နိုင်ငံခြားရေးအမျိုးသမီးနဲ့ ၂ နာရီကြာဆွေးနွေးရတယ်တဲ့။ ပါဝင်သင့် ပါထိုက်တဲ့သူတွေနဲ့ စကားပြောမယ်ဆိုတာ မှန်ပေမယ့် စစချင်းတော့ အားလုံး မပါနိုင်ဘူး။ ပါနိုင်တဲ့ လူတွေက လုပ်နိုင်သလောက်လုပ်ထားကြပေါ့။ ဥပမာ ဒုက္ခသည်တွေကယ်နိုင်မလား။ အကူညီပေးရေးကို လုပ်နိုင်သလောက်လုပ်ထားပေါ့။ လက်ရှိအခြေအနေကိုတော့ ဘယ်သူမှ ကြည့်မနေချင်ဘူးပေါ့။ နည်းလမ်းရှာကြံကြဖို့ပေါ့။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ဒါအပြင် ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့ ဆာဆာကာဝါ ဆွေးနွေးခဲ့တာကိုလည်း ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာက
ခွန်ဥက္ကာ ။. ။ ဗမာပြည်အရေး နည်းလမ်းရှာကြဖို့ ဒီအတိုင်းလွှတ်ထားရင်တော့ လူထုသိပ်နာတာပေါ့ဗျာ။ အထူးသဖြင့်တော့ လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေါ့ဗျာ။ ဒါကြောင့် တာဝန်တကယ်ရှိတဲ့ အာဆီယံတိုင်းပြည်တွေက လက်တွေ့ထိထိရောက်ရောက်တခုခုလုပ်ပါလို့ သူတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်တဲ့။ မနက်ဖန် ဘန်ကောက်ပြန် ၊သဘက်ခါ ဂျပန်ပြန်မယ်တဲ့။ အဲဒီတော့ အခုခရီးစဉ်ကနေ ဘာမျှော်လင့်နိုင်ပါသလဲလို့ မေးရာမှာ ဦးအောင်သူငြိမ်း က
ဦးအောင်သူငြိမ်း ။. ။ အာဆီယံက ဗမာပြည်အရေးမှာ တကယ်ကို သဘောထားကွဲတော့ အုပ်စုကွဲနေပါတယ်။ ဒါတွေကို အထူးကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့။ တကယ်လို့သား လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ နဲ့လုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်တော့ လမ်းစပွင့်တယ်ပြောရပါမယ်။ သိပ်တော့အများကြီး မျှော်လင့်လို့မရပါဘူး။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ မြန်မာဆိုင်ရာ အာဆီယံ အထူးကိုယ်စားလှယ် ကမ္ဘောဒီယား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ဒီလထဲ မကြာခင် သွားရောက်ဖို့ တရုတ်အထူးသံလှုပ်ရှားမှုနည်းလာချိန်နဲ့ ကုလအထူးသံလှုပ်ရှားမှုမစသေးခင်မှာ ဂျပန်အထူးသံခရီးစဉ်ဖြစ်လာတာလို့ သုံးသပ်မှုတွေရှိ်လာပါတယ်။
Sasakawa ငွိမျးခမျြးရေးခရီး ဘယျအထိ ပေါကျရောကျမလဲ
မွနျမာ့ငွိမျးခမျြးရေးကွားဝငျဆောငျရှကျသူ နိပှနျဖေါငျဒေးရှငျး ဥက်ကဌ Sasakawa နဲ့ တိုငျးရငျးသား လကျနကျကိုငျအဖှဲ့တှေ မတျလ ၁ဝ ရကျနကေ့ ထိုငျးနိုငျငံ ၊ ခငျြးမိုငျမွို့မှာတှဆေုံ့ခဲ့ပွီး မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ အာဆီယံအထူးကိုယျစားလှယျ ခရီးစဉျကိစ်စနဲ့ လူသားခွငျး စာနာမှုဆိုငျရာ အကူအညီတှအေတှကျ ဆှေးနှေးခဲ့ကွပါတယျ။
ဆာဆာကာဝါဟာ ဒီအစညျးအဝေးမတိုငျခငျ၊ အာဆီယံဥက်ကဌ ကမ်ဘောဒီယားဝနျကွီးခြုပျ နဲ့ တှဆေုံ့ခဲ့သလို၊ ထိုငျးနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး၊ အငျဒိုနီးရှားနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးတို့နဲ့လညျးတှဆေုံခဲ့ပါတယျ။ ဆာဆာကာဝါရဲ့ခရီးစဉျနဲ့သူရဲ့ကွိုးပမျးမှုကနေ ဘာတှမြှေျောလငျ့နိုငျပါမလဲ။ ဒီအကွောငျးအရာတှကေို ဆာဆာကာဝါနဲ့တှဆေုံ့ခဲ့သူတခြို့အပါအဝငျ၊ သုံးသပျသူတခြို့နဲ့ဆကျသှယျမေးမွနျးပွီး ကိုဝငျးမငျးက တငျပွထားပါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ မွနျမာပွနျလညျသငျ့မွတျရေး အထူးကိုယျစားလှယျ ဂပြနျ နီပှနျဖောငျဒေးရှငျး ဥက်ကဌ ဆာဆာကာဝါ အနနေဲ့ ကရငျ၊ ရှမျး ၊ ကရငျနီ လကျနကျကိုငျတပျ KNU,RCSS, KNPP တို့အပွငျ တနိုငျငံလုံး အပဈရပျစာခြုပျ NCA လကျနကျကိုငျ ၁ဝဖှဲ့ရဲ့ ငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးစဉျအဖှဲ့ PPST နဲ့ တှရေ့ာမှာ ထူးခွားခကျြကိုတှဆေုံ့ခဲ့တဲ့ PPST ဦးဆောငျအဖှဲ့ဝငျ ဗိုလျမှူးကွီးခှနျဥက်ကာ က .
ခှနျဥက်ကာ။. ။ အာဆီယံ ကိုယျစားလှယျသှားမယျ ခရီးစဉျအပျေါ သူအနနေဲ့ အထောကျကူပွုမယျဆိုတာပါပဲ။ သူက လကျတှအေ့ထောကျကူဖွဈအောငျ တိုကျတှနျးမယျ။ သူအတှအေ့ကွုံကို ရှငျးပွမယျ့သဘောပါ။ ဒါကွောငျ့ ကနြျောတို့ကလညျး ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမယျ။ အဓိကကတော့ ဆငျးရဲဒုက်ခရောကျနတေဲ့ ပွညျသူလူထုကို အကူအညီပေးဖို့ပေါ့ဗြာ။ ဒုက်ခသညျတှကေို ကူညီဖို့ ပေါ့ဗြာ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ဒါအပွငျ လကျရှိ ခငျြးမိုငျ ကို ရောကျနတေဲ့ ISP မွနျမာ့ မဟာဗြူဟာနဲ့ မူဝါဒလလေ့ာရေးအဖှဲ့က ညှနျကွားရေးမှူး ဦးအောငျသူငွိမျး ကလညျး
ဦးအောငျသူငွိမျး (ISP မဟာဗြူဟာနဲ့ မူဝါဒလလေ့ာရေးအဖှဲ့) ။. ။ လူသားခငျြးစာနာမှု Humanitarian Ground ကနေ တဖွညျးဖွညျးနဲ့ ရှဆေ့ကျတိုးလို့ရအောငျ ခညျြးကပျခငျြတဲ့သဘောရပါတယျ။ တဖကျကလညျး ဘယျလိုပွသာနာရှိလဲဆိုတော့ တလောလေးက နိုငျငံခွားရေးဌာန စဈကောငျစီက ကွညောခကျြထုတျတဲ့အခါမှာ နိုငျငံတကာက ဒီလို ကွားဝငျဖွနျဖွမှေုတှဝေငျလုပျတဲ့ကိစ်စတှမှော သူတို့က မောငျနှငျတဲ့နရောမှာ နမေယျဆိုတဲ့ကိစ်စမှာ လုပျရကိုငျရ သိပျတော့လှယျတဲ့ပုံစံမရပါဘူး။ နောကျတခုကကွတော့လညျး လကျရှိ NUG တို့ New Plan တို့ကိုလညျး အကွမျးဖကျအုပျစုအနနေဲ့ ကွညောထားတယျပေါ့ဗြာ။ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးဖို့မရှိဘူးဆိုပွီးကွညောထားတယျ။ ပွသာနာတှကေတော့ ပွလေညျဖို့ ခကျမယျထငျတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ဆာဆာကာဝါ အနနေဲ့ အခုထိုငျးနိုငျငံ မတိုငျခငျ တနင်ျလာနကေ့ ကမ်ဘောဒီယားနဲ့ စနကေ အငျဒိုနီးရှား ခရီးတှကေိုလညျး ထူးထူးခွားခွား ဆှေးနှေးခဲ့တာတှကေိုလညျး ရှငျးပွခဲ့တယျလို့ ဗိုလျမှူးကွီး ခှနျဥက်ကာ က ပွောပွာပါတယျ။
ခှနျဥက်ကာ ။. ။ ကမ်ဘောဒီယားမှာက ဟှနျဆနျနဲ့လညျး တှတေ့ယျ။ အာဆီယံ အထူးသံတမနျနဲ့လညျးတှတေ့ယျ။ ဟှနျဆနျ နဲ့ မိတျဆှဖွေဈတာ အနှဈ ၃၀ ရှိပွီတဲ့။ ဟှနျဆနျ က သူပွောတယျတဲ့ သူဥက်ကဌ ဖွဈတုံးမှာ အကွံပေးအဖွဈခနျ့ဖို့တဲ့။ အကွံပေးခနျ့တာတော့ သူလကျမခံသေးဘူးပေါ့။ ဒါပမေယျ့ လိုအပျတဲ့အကူအညီတှပေေးမယျပေါ့။ အထူးကိုယျစားလှယျ ခရီးစဉျမှာ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမယျလို့တော့ သူပွောတယျ။ လိုအပျတာကိုတော့ ပနျ့ပိုးမှာပေါ့ဗြာ။ ကမ်ဘောဒီးယားပွီးရငျ ရှနှေ့ဈမှာ အငျဒိုနီးရှားကလညျး ဥက်ကဌဖွဈမယျပေါ့။ အငျဒိုနီးရှားမှာ နိုငျငံခွားရေးအမြိုးသမီးနဲ့ ၂ နာရီကွာဆှေးနှေးရတယျတဲ့။ ပါဝငျသငျ့ ပါထိုကျတဲ့သူတှနေဲ့ စကားပွောမယျဆိုတာ မှနျပမေယျ့ စစခငျြးတော့ အားလုံး မပါနိုငျဘူး။ ပါနိုငျတဲ့ လူတှကေ လုပျနိုငျသလောကျလုပျထားကွပေါ့။ ဥပမာ ဒုက်ခသညျတှကေယျနိုငျမလား။ အကူညီပေးရေးကို လုပျနိုငျသလောကျလုပျထားပေါ့။ လကျရှိအခွအေနကေိုတော့ ဘယျသူမှ ကွညျ့မနခေငျြဘူးပေါ့။ နညျးလမျးရှာကွံကွဖို့ပေါ့။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ဒါအပွငျ ထိုငျးနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးနဲ့ ဆာဆာကာဝါ ဆှေးနှေးခဲ့တာကိုလညျး ဗိုလျမှူးကွီး ခှနျဥက်ကာက
ခှနျဥက်ကာ ။. ။ ဗမာပွညျအရေး နညျးလမျးရှာကွဖို့ ဒီအတိုငျးလှတျထားရငျတော့ လူထုသိပျနာတာပေါ့ဗြာ။ အထူးသဖွငျ့တော့ လူသားခငျြးစာနာမှုအကူအညီပေါ့ဗြာ။ ဒါကွောငျ့ တာဝနျတကယျရှိတဲ့ အာဆီယံတိုငျးပွညျတှကေ လကျတှထေိ့ထိရောကျရောကျတခုခုလုပျပါလို့ သူတိုကျတှနျးခဲ့ပါတယျတဲ့။ မနကျဖနျ ဘနျကောကျပွနျ ၊သဘကျခါ ဂပြနျပွနျမယျတဲ့။ အဲဒီတော့ အခုခရီးစဉျကနေ ဘာမြှျောလငျ့နိုငျပါသလဲလို့ မေးရာမှာ ဦးအောငျသူငွိမျး က
ဦးအောငျသူငွိမျး ။. ။ အာဆီယံက ဗမာပွညျအရေးမှာ တကယျကို သဘောထားကှဲတော့ အုပျစုကှဲနပေါတယျ။ ဒါတှကေို အထူးကိုယျစားလှယျအနနေဲ့ ဘယျလိုလုပျမလဲပေါ့။ တကယျလို့သား လူသားခငျြးစာနာမှုဆိုငျရာ နဲ့လုပျဆောငျမယျဆိုရငျတော့ လမျးစပှငျ့တယျပွောရပါမယျ။ သိပျတော့အမြားကွီး မြှျောလငျ့လို့မရပါဘူး။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ မွနျမာဆိုငျရာ အာဆီယံ အထူးကိုယျစားလှယျ ကမ်ဘောဒီယား နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးအနနေဲ့ မွနျမာနိုငျငံကို ဒီလထဲ မကွာခငျ သှားရောကျဖို့ တရုတျအထူးသံလှုပျရှားမှုနညျးလာခြိနျနဲ့ ကုလအထူးသံလှုပျရှားမှုမစသေးခငျမှာ ဂပြနျအထူးသံခရီးစဉျဖွဈလာတာလို့ သုံးသပျမှုတှရှေိလာပါတယျ။